Adeegsiga xarunta iyo kirada | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Iskuuladeena iyo tas-hiilaadkeena ayaa loo heli karaa adeegsi kooxeed iyo kireysi marka iskuulku uusan furneyn. Si aad u codsato adeegsiga meel ka mid ah Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, waxaa lagu weydiistay inaad hesho rukhsad adeegsi oo xarun ah. Ogolaansho ayaa loo soo saaray labadaba iyada oo aan loo isticmaalin xarunta kharashka iyo kirada xarunta.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan nala soo xiriir.
Jadwalka Xarumaha Degmooyinka
Sida loo Codsado Ogolaanshaha Isticmaalka Xarunta
Inta badan boosaska ka jira Degmadeena waxaa jadwaleeya Jadwalaha Xarunta Degmada, hase yeeshe, waxaan sidoo kale leenahay jadwallo loogu talagay goobo gaar ah oo ka tirsan Degmada (sida barkadaha, barafka iyo Xarunta Arts). Fadlan tixraac booska gaarka ah ee aad xiisaynaysid (xulashada hoose) si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo xafido booska.
Dhammaan kirooyinka uu qorsheeyo Jadwalka Xarunta Degmada ayaa laga codsan doonaa inay u hoggaansamaan Nidaamka Guddiga Dugsiga 902 . Markii ujradaha kirada ama shaqaalayntu ay khuseeyaan Nidaamka 902, fadlan tixraac Jadwalka Khidmadda Kireynta Kireynta ee Guddiga Dugsigu oggolaaday. Tilmaamaha guud, fadlan tixraac Macluumaadka Guud ee Adeegsiga Xarunta . Ka dib markaad hesho rukhsad ama qaansheegad, waxaad ku bixin kartaa kaarka deynta halkan .
Siyaasadda Guddiga Dugsiga 902
Foomka Codsiga Adeegsiga Xarunta
Adeegsiga Xarunta iyo Jadwalka Kharashka Kirada
Foomka Isticmaalka Aagga Iskuullada (Loogu talagalay Scouts, Ciidan iyo Brownies)
Codsiga Jimicsiga ee AAU / MYAS Kooxaha Waalidka Dulqaaday
Layout-ka kafateeriyada Dugsiga Sare
Xarunta Farshaxanka ee Minnetonka on 7 [KHARIIDADDA]
Xaruntan waxaa la dayactiray 2009 waxayna leedahay tiyaatarka proscenium 680-kursi oo leh qolal tababar ah oo loogu talagalay koox-kooxeedyada, kooxaha iyo kooxaha muusikada. Xaruntu waxay ku taal meel u dhow albaabka weyn ee Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Tiyaatarka istuudiyaha waa meel sanduuqa madoow ee bedbeddelka lagu isticmaali karo oo dhagaystayaal ku qabsan kara ilaa 136. Ka gal albaabka 3N.
Boos celinta Xarunta Farshaxanka:
Garoonka Einer Anderson
Garoonka ayaa loo cusbooneysiiyay garoon cows ah waxaana la iibsaday qubbad si sanadka oo dhan loogu isticmaalo garoonka dhexdiisa 2004. Qulqulka ayaa daboolaya garoonka inta u dhexeysa bilaha Nofeembar iyo Maarso. Xaruntu waxay ku taal dhinaca koonfureed ee dhismaha Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Boos celinta goobta MHS ama Tonka Dome: 952-401-5948
Eeg Jadwalka Tonka Dome
Eeg Jadwalka Isticmaalka Goobta
Eeg Jadwalka Dhimashada Battery North
Eeg Jadwalka Battery Cage Jadwalka Koonfurta
Xarunta Waxqabadka Pagel [KHARIIDADDA]
Xaruntan waxaa la dhisay 2001, toos uga dambeeya dhismaha Dugsiga Sare ee Minnetonka. Xarunta waxaa ku jira qol miisaan leh, orod orod iyo xeegada xeegada. Xarunta Waxqabadka ee Pagel waxay ku taal dhinaca koonfureed ee xarunta Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Kaydinta Xarunta Pagel:
Goobaha Jimicsiga ee MHS
Waxaa jira afar jimicsi oo ku yaal dhismaha Dugsiga Sare ee Minnetonka:
Gym-ka: Goobta jimicsiga ee jimicsiga waxaa la dhisay 1999 waana xarunta ugu weyn jimicsiga ee Dugsiga Sare ee Minnetonka oo leh fadhiisimo ay ku fariistaan dadka daawadayaasha ah 2,076 Kani waa jimicsiga ugu weyn Degmada. Ka soo gal dhanka galbeed ama "Tonka Center" irridda si aad u gasho qolka jimicsiga.
Jimicsiga Bariga: Goobta jimicsiga waxaa la dayactiray sanadkii 2008 waxayna leedahay garoon kubbadda koleyga oo buuxa iyo fadhiga 1,220 daawadayaal ah. Ka soo gal albaabka weyn si aad u gasho qolka jimicsiga.
Jimicsiga Dambe: Goobtaan jimicsiga ayaa la dayactiray sanadkii 2008 waxayna leedahay barxad kubbadda koleyga oo dhameystiran iyo fadhiga bullaacad ee 129. Ka soo gal dhanka galbeed ama "Xarunta Tonka" si aad uga soo gasho qolka jimicsigan.
Jimicsiga Dhexe: Jimicsigaan waxaa ku yaal Minnetonka Jimicsiga. Ka soo gal dhanka galbeed ama "Tonka Center" irridda si aad u gasho qolka jimicsiga.
Goobta Halyeeyada ayaa la furay bishii Maajo 2007 waana garoon kubbadda baseball-ka 600-kursi guga iyo bilaha xagaaga waxaana loo beddelaa dhisme kubbadda cagta xilliga dayrta. Waxay leedahay garoon cows macmal ah waxayna leedahay nal loo isticmaalo fiidkii.
Si aad u keydiso goobta Veterans:
Xarunteena Waxbarshada Bulshada waxay bixisaa qolal lagu kulmo, fasallo, jimicsiyo iyo meelo kale. Fadlan la xiriir MCEC haddii aad danaynayso inaad boos ka sii haysato dhismahan.
Si aad boos uga dhigato MCEC:
Xarunta biyaha ee Minnetonka waxaa la dhisay sanadkii 2009 waxayna ku taalaa dhismaha iskuulka Minnetonka Middle School East. Waa goob lagu dabaasho iyo madadaalo madadaalo iyo quusid.
Qoto dheer toddobo cagood oo qotodheer dhammaadka bilowga iyo 3.5 dhudhun oo qotodheer - abuurista caabbinta biyaha oo yaraata
Xaaladda sifeynta farshaxanka- diyaarado badan oo biyo yar yar ah halka kuwa yar yar ee waaweyn ay soo saaraan wax yar oo ka mid ah barkadda
Sideed wadiiqadood oo dabaal ah oo leh sagaal saf oo haad ah - haad yar oo aan la isticmaalin oo ku socda labada dhinac ee barkadda ayaa yaraynaya dhabar-jabinta dabbaasha ee waddooyinka bannaanka
Macluumaadka kale ee barkadda
Quusitaan heer sare ah oo heer sare ah oo si wanaagsan loo galiyo oo leh laba loox oo quusidda ah, saddex baloogyo dheeraad ah oo laga bilaabo iyo saddex waddo oo gaagaaban oo lagu bilaabayo leyliska dhismaha
Fadhiga Bleacher ee 370 iyo balakoonka dabaasha 150
Boos celinta Aquatics:
Qeybaha Dhaxalka ayaa la furay Maajo 2008 waana dhisme afar-geesood ah oo kubbadda kubbadda cagta oo si toos ah uga dambeeya Aagga Veterans Field. Labada gooboodba waxay ku yaalliin dhinaca koonfur-galbeed ee xarunta Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Si loo xajiyo garoon jilicsan:
Ururka Kubbadda Cagta ee Minnetonka Gabdhaha